कान बज्ने वा कराउने कारण यस्तो छ -डा. निता शाक्य मल्ल | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
कुनै शब्द उत्पन्न नै नहुदा पनि आवाज सुनिनुलाई कान बज्ने वा कराउने भनिन्छ । के कारणले कान कराउँछ ? अहिलेसम्मको अध्ययनमा कान बज्ने कारण यही नै हो भन्ने ठोस तथ्य पत्ता लागेको छैन् । धेरै कारण कान बज्न सक्छ । तर अधिकांशमा कानको संक्रमणका कारण कान बज्ने गर्दछ । कहिले काँही कानमा चोट पटक वा कुनै रोग नलागी कान एक्कासी टिनीनिन्न गरेर कराउँछ । के कारणले कान कराउने वा बज्ने गर्छ ? वरिष्ठ नाक, कान,घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. निता शाक्य मल्लले निरन्तर कान बज्ने गरेको छ भने तुरुन्तै चिकित्सक कहाँ जान सुझाएकी छिन् । पुरा समाचार पढ्नुहोस्